नागरिकता बिहीन आमाछोरा बाख्राको खोरमा ! ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भूइँमा सुतेर जीवन बिताउन बाध्य , – AB Sansar
नागरिकता बिहीन आमाछोरा बाख्राको खोरमा ! ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भूइँमा सुतेर जीवन बिताउन बाध्य ,
January 11, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on नागरिकता बिहीन आमाछोरा बाख्राको खोरमा ! ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भूइँमा सुतेर जीवन बिताउन बाध्य ,
नागरिकता बिहीन आमाछोरा बाख्राको खोरमा ! ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भूइँमा सुतेर जीवन बिताउन बाध्य , यासोक ( बस्तीको बीचमा एउटासानो घर छ । घर छेउछाउ दुर्गन्ध फैलिएको छ । साँघुरो घरको सिकुवामा खाल्डाखुल्डी र फोहोर छ । घरभित्र साँघुरो कोठा छ । एकापट्टि बाख्रा बाँधिएको छ भने अर्कोपट्टि खाना पकाउने चुलो छ । बाख्राको पिसाबले कोठा नै दुर्गन्धित छ ।
तर त्यही दुर्गन्धित कोठामा ८० वर्षीया वृद्धा देवीमाया बुढाथोकी र उनका ५१ वर्षीय छोरा शेरबहादुर बुढाथोकी बस्दै आएका छन् । फोहोर र दुर्गन्धले देवीमाया लामो समयदेखि बिरामी भएकी छन् । यो कहालीलाग्दो अवस्था पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–१ स्थित बुढाथोकी बस्तीको हो ।।
जमिनको नाममा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुँदा पीडितलाई स्थानीयले आश्रय दिएका छन् । थोत्रा र मैला लुगा लगाएर वर्षौंदेखि त्यही कोठामा जीवन काट्दै आएको परिवार मागेर छाक टार्ने गर्छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । तर देवीमायाले नागरिकता पाएकी छैनन् । एकातिर नागरिकता नहुँदा राज्यको सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको पीडा छ भने अर्कोतर्फ पीडित परिवारले सुकुम्बासी जीवन बिताउँदै छ ।।
खाली जमिनमा थोत्रा कपडा ओढेर रात कटाउने गरेको पीडित देवीमायाले सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ॅखानेकुरा खोज्न छोरो जान्छ । कहिले लिएर आउँछ, कहिले खाली हात फर्किन्छ ।’ खानेकुरा नभएपछि धेरै रात भोकै काटेको दुःखेसो बुढाथोकीको छ । ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भूइँमा सुत्नुपरेको छोरा शेरबहादुरले बताए ।।
आमा बिरामी हुनुहुन्छ । उपचार गर्ने पैसा छैन । राति जाडो हुन्छ’ –भूइँमा छरपस्ट च्यातिएका लुगाहरू भेला पार्दै उनले भने । वृद्धा आमालाई चिसोबाट जोगाउन नसकेको उनको गुनासो छ । याे खबर आजको ब्लाष्ट दैनिकमा रहेकाे छ ।।
कैलालीमा रुखको मु’ढामा मोटरसाइकल ठो:क्कि’दा ३५ बर्षीय युवकको मृ:त्यु !
घर बनाउन सिमेन्ट किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराको जाँच अवश्य गर्नुहोस् ?
अन्तत भारतीय पत्रकारले नै भने: कालापानी नेपालकै हो, भारतले छोड्नु पर्छ !